Kitra : mpitsara 25 nahazo fiofanana avy amin’ny Fifa | NewsMada
Kitra : mpitsara 25 nahazo fiofanana avy amin’ny Fifa
Par Taratra sur 20/08/2016
Nifarana, omaly, ny fiofanana mahakasika ny tanjaka ara-batana, ho an’ny mpitsara baolina kitra “elite”, eto Madagasikara. Ireo manampahaizana avy amin’ny federasiona iraisam-pirenena (Fifa) no nanolotra izany : ilay teratany djibosianina, Mohamed Houssein Ali, sy ilay Roandey, Célestin Ntagungira. Nanampy azy ireo ny talen’ny departemantan’ny mpitsara, Andrianantenaina Pascal sy Rakotoson Aina ary Vivien Anivana, mpanabe ara-batana eo anivon’ny federasiona malagasin’ny baolina kitra. Anisan’ny nanofanana ireo mpitsara ny tanjaka, ny lafiny teknika sy ny fahafantaran’ny tsirairay ny lalàna mifehy ny baolina kitra, ary ny fomba fanomanantena mialoha ny hiatrehana fihaonana. Nambaran’i Celestin Ntagungira fa tsy maintsy matanjaka ary manana taktika ny mpitsara baolina. Tsy tokony hiolonolona fotsiny amin’izao fa mila mahay miara-miasa amin’ireo tomponandraikitra rehetra toy ny federasiona sy ireo mpanofana.
Nanamafy izany ny filoha lefitry ny federasiona, Andriamiasasoa Doda, fa manana andraikitra goavana sy manan-danja amin’ny lalao iray ny mpitsara baolina. Hiankinan’ny kalitaon’ny fihaonana iray ny fahaizan’ny mpitsara sy ny fanapahan-kevitra rehetra raisiny, ao anatin’ny fotoana fohy.
25 mianadahy ireo nanaraka ny fiofanana ka 17 ny mpitsara iraisam-pirenena ary 8 mpitsara nasionaly. Anisan’ireo niofana i Hamada Nampiandraza, nitsara ny «Supercoupe»-n’ny Caf, sy Rakotozafinoro Pélagie, inefatra nitsara ny dingan’ny famaranana tamin’ny «Mondial» vehivavy ka indroa teo amin’ny sokajy U17.